विधार्थीले यसरी समय व्यस्थापन गरेर पढ्दा राम्राे नतिजा ल्याउन सक्छन् - ज्ञानविज्ञान
विधार्थीले यसरी समय व्यस्थापन गरेर पढ्दा राम्राे नतिजा ल्याउन सक्छन्
विधार्थीकाहरूकाे लागि समय व्यवस्थापन गर्नु चुनाैतीपुर्ण काम हाे । तर, केही सामान्य उपाय अपनाएर विधार्थीहरूले समयलाइ सजिलै व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । जसमध्ये केही यहाँ उल्लेख गरिएका छन् ।राती धेरै लामाे समयसम्म बसेर नपढ्नुहाेस् । यसाे गर्दा बिहान छिटाे उठ्न सकिदैन र अाफुले साेचे अनुसार काम गर्न सकिदैन ।
त्यसैले हरेक दिन बिहान छिटै उठ्नुहाेस् र केही समय शारिरीक अभ्यास अथभा याेगा गर्नुहाेस् ।त्याे दिनभर अाफुले पढ्ने विषय र कामहरू टिपाेट गर्नुहाेस् । कामकाे प्राथमिकतालाइ छुट्याउनुहाेस् । पढ्दा पनि प्राथमिकता कुन विषयलाइ दिने भनेर समय छुट्याउनुहाेस् ।
यसरी पढ्दा दिमाग थाक्दैन र स्मरणशक्ति बढ्छ ।तालिका अनुसार विषय परिवर्तन गरेर पढ्दा अाफ्नाे दिमागलाइ केहि मिनेट अाराम दिएर नयाँ विषयकाे लागी तयार हुनुहाेस् । यसाे गर्दा दिमागमा पुरानाे विषय र नयाँँ विषयका कुराहरू जुध्दैनन्, सम्झन सजिलाे हुन्छ ।
पढ्ने समयमा माेवाइलकाे नाेटिफिकेसन बन्द गर्नुहाेस् । हल्का नहुने ठाउँमा बसेर पढ्नुहाेस् । यसाे गर्दा थाेरै समयमा पढ्नुपर्ने कुरा धेरै सिक्न सकिन्छ ।हल्का र पाेषणयुक्त खानेकुरा खानुहाेस् । खानामा असन्तुलन भयाे भने अल्छिकन बढ्ने, बिरामी हुने जस्ता समस्या अाउँछन्, जसले गर्दा अाफ्नाे समय तालिका सबै बिग्रिन्छ ।
बिदाकाे दिनमा अाफ्ना व्याक्तिगत कामहरू सक्ने प्रयास गर्नुहाेस् । जसले गर्दा त्याे हप्ता भरि अनावश्यक तनाव हुदैन ।अाफ्ना रूचिका विषय जस्तै पेन्टिङ, नृत्य, गायन, लेखन अादिकाे लागी पनि अाफ्नाे एक हप्ताकाे तालिकामा समावेश गर्नुहाेस् । यसले गर्दा तपाइकाे दिमाग र शरिर दुवै स्फुर्त रहिरहन्छ ।
सधै सकारात्मक साेच भएका व्याक्तिहरूकाे सङ्गत गर्नुहाेस् । सङ्गतले व्याक्तिकाे जिवनमा धेरै प्रभाव पार्छ । गलत सँगतमा पर्नु भयाे भने तपाइकाे समय तालिका मात्र नभएर तपाइकाे जिवनकाे समय रेखा नै अस्तव्यस्त हुनसक्छ ।
पढ्नु किन आवश्यक छ ?
आज एउटा साधारण मानिसले पनि आफ्नो सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिलाउन चाहन्छ । यहींनिर एउटा साधारण तर गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हुन्छ, पढ्नु किन आवश्यक छ ? हाम्रो साधारण बुझाइमा पढ्नु भनेको राम्रो जागिर प्राप्त गर्नु हो, तर यत्तिकैमा जवाफ सीमित छैन । आज पढ्नु धेरै कारणले आवश्यक छ ।
जान कोरकोरनले आफ्नो पुस्तक ‘शिक्षक जो पढ्दैन’ मा लेखेका छन् कसरी उनी पढेर ग्रेजुएट भएर शिक्षक बने र पछि पढ्दै–पढाउँदै उनी सफल व्यापारी बने । जानले आफ्नो कथामा लेखेका छन्, पढ्न शुरु गर्नुभन्दा पहिले कसरी आफू एक्लो अनुभव गर्थे, कसरी उनलाई अरूसँग कुरा गर्न पनि डर लाग्थ्यो, अरूले कुरा गर्न खोज्दा लाज मानेर उनी एकान्तमा गएर बस्थे ।
यस कारण के भन्न सकिन्छ भने पढ्दै जाँदा मानिसले सबै थोक सजिलै प्राप्त गर्न सक्छ, जसको उसले कहिल्यै कल्पना पनि गरेको थिएन ।शिक्षा हाम्रो मौलिक अधिकार हो तर हाम्रो समाजमा आज पनि यस्ता थुप्रै मान्छे छन् जो ओखतिको बोतलमा लेखिएका निर्देशन पढ्न सक्दैनन्, आवेदन लेख्न अरूमाथि निर्भर छन्, सडकमा लेखिएका चिह्नहरू पढ्न नसक्दा दुर्घटनाका शिकार हुन्छन्, अरूबाट ठगिन्छन् ।
अनपढ मान्छेलाई छिट्टै रिस उठ्छ, उनीहरू छिट्टै निराश पनि हुन्छन् र सधैं भयग्रस्त बाँच्छन् । यी सबै कुराबाट जोगिनका लागि पनि पढ्नु आवश्यक छ । पढ्दै जाँदा विस्तारै सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ध्रुव सत्य हो । शरीरको अन्य मांसपेशीजस्तै मस्तिष्कलाई पनि सक्रिय राख्न व्यायाम आवश्यक हुन्छ, अन्यथा हाम्रो मस्तिष्क कमजोर हुँदै जान्छ ।
यस कारण भनिएको छ, ‘प्रयोग गर वा यसलाई गुमाऊ ।’ चेस खेल्नु, पज्जल खेल्नु, हिसाब गर्नु मस्तिष्कको राम्रो व्यायाम हो । पढ्नु भनेको मस्तिष्कलाई सधैं सक्रिय बनाई राख्नु हो ।पढाइ मस्तिष्कको तनाव कम गर्नका लागि पनि आवश्यक छ । चाहे कामको तनाव होस् वा घरको, चाहे व्यक्तिगत तनाव होस् वा अन्य दैनिक जीवनमा आइपर्ने तनाव होस् यी सबै खाले तनाव कुनै कथाको किताब होस् वा कोर्सको पढ्दा गायब हुन्छ ।
कुनै राम्रो लेखकको किताबले हामीलाई एउटा यस्तो काल्पनिक दुनियाँमा लिएर जान्छ जहाँ हामी आफ्नो तनाव बिर्सेर त्यसैमा रमाउन थाल्छौंं ।हाम्रो ध्यान तनावबाट हट्छ र हामी आराम अनुभव गर्न थाल्छौं । यस कारण दैनिक जीवनमा आउने तनाव कम गर्न पढ्नु अति आवश्यक छ ।
पढाइले ज्ञान प्राप्त गर्न सबैभन्दा बढी सहयोगी–भूमिका निर्वाह गर्छ । पढाइले हाम्रो मस्तिष्कमा नयाँ सूचना भर्ने काम गर्छ । तपाईंसँग जति बढी सूचना हुन्छ त्यत्तिकै बढी तपाईं चुनौतीको सामना गर्न सक्षम हुनुहुन्छ । यस कारण पढाइ हाम्रो मस्तिष्कको लागि खाजा र खाना दुवैको काम गर्छ ।
यदि हाम्रो मस्तिष्कमा राम्रो खुराक छ भने जागिर पाउनु, अर्थार्जन गर्नु, स्वस्थ रहनु सजिलो हुन्छ किनभने यसलाई कसैले पनि चोर्न सक्दैन । जति तपाईं पढ्दै जानुहुन्छ त्यतिकै तपाईंको शब्द–ज्ञान पनि बढ्दै जान्छ । शब्द–शक्तिले गर्दा कसैसँग कुरा गर्न, कुनै कुरो लेख्न र जसलाई पनि आफ्नो शब्द–ज्ञानले गर्दा प्रभावित गर्न सक्नुहुन्छ ।
यसले गर्दा तपाईंको आत्मविश्वासमा वृद्धि हुन्छ । तपाईंको क्यारियर बन्छ र जागिरमा तपाईंले प्रोमोशनसमेत पाउनुहुन्छ । किताब पढ्नाले नयाँ भाषाको ज्ञान प्राप्त हुन्छ र तपाईंको व्यक्तित्वलाई एक्सपोजर प्राप्त हुन्छ ।किताब पढ्दा तपाईंको भेट विभिन्न प्रकारको चरित्र, त्यसको पृष्ठभूमि, उसको उद्देश्य, उसले गरेको गल्ती वा सफलतासँग हुन्छ ।
कुनै चरित्रमा तपाईंले आफूलाई पाउनुहुन्छ भने कुनै चरित्रमा आफ्नो साथी वा अन्यलाई । कमजोर पृष्ठभूमि भएको चरित्रले सफलता प्राप्त गर्दा तपाईं पनि सफल हुन सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ । कुनै चरित्रले बोकेको उद्देश्यबाट तपाईंलाई आफ्नो जीवनको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ ।
उसले कसरी आफ्नो गल्तीलाई सच्याउँछ वा गल्ती गरेपछि उसले के परिणाम भोग्छ भन्ने कुराले स्वमूल्याड्ढन गर्न सजिलो हुन्छ र यसरी तपाईंले मन पराएको चरित्रको छाप तपाईंको मस्तिष्कमा बस्छ । यसरी नयाँ स्मरण–शक्तिको विकास हुन्छ । पढाइले समस्याको पहिचान र त्यसको समाधान गर्न मदत गर्छ ।
हामीभित्र समालोचनात्मक चिन्तनको विकास हुन्छ । यस सीपले हामीलाई दक्ष बनाउन सहयोग गर्छ । हामी प्रत्येक दिन कुनै पनि काम गर्नुपूर्व यदि कम्तीमा पन्ध्रदेखि बीस मिनेट मात्र कुनै रोचक कथा वा कोर्सको किताब पढ्ने अभ्यास गर्छौं भने हाम्रो ध्यान पढाइमा केन्द्रित हुन्छ नै ।
साथसाथै त्यसपछि गरिने क्रियाकलापमा पनि हाम्रो ध्यान स्वत: केन्द्रित हुन पुग्छ । पढाइ यस कारणले पनि महत्त्वपूर्ण छ किनभने जति हामी पढ्छौं त्यतिकै राम्रो लेख्न पनि सक्छौं । खासगरी विद्यार्थीहरूले पढ्ने बानी बसालेपछि परीक्षाको भय पनि हुँदैन र राम्रो अड्ढ सजिलै हासिल गर्न सक्छन् ।
यहाँ विद्यार्थीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो भने गृहकार्य गर्नु पढाइ होइन, ‘काम’ मात्र हो तर विडम्बना के छ भने आजभोलि विद्यार्थीहरू घरमा गृहकार्य मात्र गर्छन् र त्यसलाई नै अभिभावकहरू सन्तानले पढिरहेको ठान्छन् ।पढाइ मनको शान्तिको लागि पनि आवश्यक छ किनभने राम्रो किताब वा आआफ्नो धर्मग्रन्थलाई पढ्दा हाम्रो रक्तचाप कम हुन्छ ।
यसले हाम्रो मनलाई भित्री शान्ति प्रदान गर्छ । यसले हाम्रो स्वभावलाई बिग्रन दिंदैन । हामी मानसिक रोगबाट ग्रस्त हुँदैनौं । यसले गर्दा हामीभित्र सकारात्मक सोच विकास हुन्छ । पढाइ निश्शुल्क मनोरञ्नको स्रोत पनि हो । हाम्रो रुचि जुन क्षेत्रमा छ त्यससँग सम्बन्धित पुस्तक पढ्दा हामीलाई भरपूर मनोरञ्जन प्राप्त हुन्छ ।
यसबाट हाम्रो कल्पनाशक्तिको पनि विकास हुन्छ र हाम्रो सुषुप्त इच्छाशक्ति जागृत हुन थाल्छ ।आज हामी सूचनाको युगमा बाँचिरहेका छौं तर जसलाई पढ्न आउँछ उसैले त्यस सूचनाबाट लाभ हासिल गर्न सक्छ ।उसले आफूलाई कुनै पनि क्षेत्रमा विकसित गर्न सक्छ । ऊ भोकभोकै मर्दैन । आज कम्प्युटर र इन्टरनेटबेगर हाम्रो काम चल्दैन ।
यसलाई चलाउन पनि पढ्नु अति आवश्यक छ । जसले पढ्न जान्दैन उनीहरूले यस कुरोबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्दैन । पढाइले हाम्रो भित्रको नकारात्मक सोचलाई सकारात्मकतामा परिवर्तन गरिदिन्छ ।पढाइको अभावमा विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा शिक्षकसँग अन्तक्रिया गर्दैनन् ।
परिणामस्वरूप उनीहरूमा विषयगत ज्ञानको कमी हुन जान्छ र परीक्षामा राम्रो ग्रेड हासिल गर्न उनीहरू सक्षम हुँदैनन् । यस कारण पनि पढ्न जरुरी छ । पढाई नगर्नेले आफ्नो विचार सही ढ·ले व्यक्त गर्न सक्दैन । उनीहरूको व्यक्तित्वमा कमी देखापर्छ । उनीहरूलाई समाज शत्रु जस्तो लाग्न थाल्छ ।
नपढ्ने मानिस सजिलै गलत स·तिमा परेर गलत बाटो अख्तियार गर्न सक्छ र आफ्नो जीवनलाई दु:खमय बनाउँछ । यस कारण पनि हामीले पढ्नु आवश्यक छ ।पढाइको अभावमा मानिसलाई आफ्नो संस्कृति र संस्कारको सही ज्ञान नहुने, एक अर्कालाई बुझ्न नसक्ने, दिनप्रतिदिन द्वन्द्व चर्कंदै जाने स्वाभाविक हो ।
यदि हामी पढ्छौं भने हामीले आफ्नो धर्म र संस्कृति मान्नुको साथै अरूको धर्म–संस्कृतिको आदर गर्न सिक्छौं । एक अर्का समुदायप्रति प्रेम–भावना बढ्छ । हामी सबै एक हौं भन्ने भावना विकसित हुन्छ । एक अर्काप्रति सहयोगी भावनामा वृद्धि हुन्छ र राष्ट्रमा शान्ति स्थापित हुन्छ । यो त्यस बेला मात्र सम्भव हुन्छ जब हामी पढ्छौं । यस कारण चौतर्फी विकासका लागि पढ्नु आवश्यक छ।
ज्ञान र सही बुझाइको अभावले गर्दा नै हाम्रो समाजमा विभिन्न प्रकारका कुरीति र विस·गति बढ्दै गएको छ । आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि महिला हिंसा, महिलाप्रति हाम्रो दृष्किोणमा परिवर्तन भएको छैन । आज पनि सामाजिक विभेद कायमै छ । खासगरी हाम्रो देशमा विद्यमान दाइजो, झुमाप्रथा, छाउपडी प्रथा, वादी, छुवाछूत र घुम्टो प्रथाको एक मात्र कारण जनचेतनाको अभाव र अशिक्षा हो ।
यी विस·तिहरू हटाउन पनि पढ्नु अति आवश्यक छ किनभने महिलाहरूको हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको हनन, उनीहरूको सामाजिक शोषण, उनीहरूको हत्या नहुन दिन पनि महिलाहरूलाई पढाउनु अति आवश्यक छ । यदि सबै महिला पढ्न थाल्छन् भने जुन गतिमा जनसङ्ख्या बढ्दै गएको छ र विश्व बढ्दो तापक्रमबाट जुझिरहेको छ त्यसलाई पनि न्यून गर्न सकिन्छ र राष्ट्रिय विकासले पनि गति लिन्छ । यस कारण महिलाहरूलाई गहनाले होइन, शिक्षाले सजाउनु वर्तमानको खाँचो हो ।
अन्त्यमा पढ्न यस कारणले आवश्यक छ किनभने शब्द जुन बोल्न र लेख्नको लागि प्रयोग गरिन्छ त्यो हाम्रो जीवनरूपी भवनको जगका ढुङ्गा हो । तपाईले प्रयोग गर्ने शब्दले नै तपाईंको भविष्य निर्धारण गर्छ । यस कारण पढाइबाट नै एक अर्कासँग सम्बन्ध, परिवार, समाज , राष्ट्रको निर्माण सम्भव भएकोले पढ्नु आवश्यक छ ।
Don't Miss it के तपाईं आफैलाई साच्चै माया गर्नुहुन्छ ? यसरी जाँच्नुहोस
Up Next के तपाइलाइ अल्छिपनले हैरान बनाएकाे छ ? यसरी पाउनुहाेस् अल्छिपनबाट छुटकारा
अरूले आफुलाइ बिश्वास नगरेकाे अवस्थामा के गर्ने ?
के तपाइलाइ पनि अरूले विश्वास गर्दैनन ? अथवा राम्राे काम गरेता पनि तपाइ माथि अरूले विश्वास गर्न चाहदैनन् भने याद…
किन हुँदैन तेल लगाउन कपालमा चाँया पर्दा ?
यसरी कपाललाई ओसिलो बनाउन तेल लागाइने गरे पनि डाक्टरहरुले भने तेलले मानिसको टाउकोको तालुमा एउटा तह बनाउने र त्यो छालामा…
के तपाईलाइ जति बेला पनि अल्छि लाग्ने गर्छ ? यस्ता छन् अल्छीपना हटाउने प्रभावकारी उपाय
धेरैचोटि हामी कुनै काम तत्काल नगरेर पछिका लागि टारिदिन्छौं अनि बिस्तारै यो हाम्रो बानी बन्दै जान्छ । यसले हामीलाई अल्छे…
यस्ता छन् , छाला सुन्दर बनाउने घरेलु उपाय
१. गाजरको जुस आधा गिलास बिहानको समयमा खाली पेटमा पिउने गर्नुस् । २. चिया तथा कफिको सेवन कमगर्नु पर्छ ।…
खानेकुरामा मिसावटको कारणले विषाक्त बन्दै खानेकुराहरु
चाडबाडमा तुलनात्मक रुपमा खाद्य वस्तुको खपत बढी हुन्छ । तर, यस्तै मौकामा हो, कालोबजार फस्टाउने अनि गलत नियत भएका व्यापारीले…
गर्भवती महिलाले खानु नहुने कुराहरु
१. अल्कोहल : अल्कोहलले पनि भर्खर विकास हुँदैं गरेका शिशुको दिमागलगायतका अंगलाई क्षति पु¥याउँछन् । यसले गर्दा पछि बच्चा मानसिक…
मह – घ्यूकुमारी प्याक : ताजा घ्यूकुमारीको पातलाई राम्ररी धोएर पानीमा उमाल्नुस् र यसलाई लेदो (पेस्ट) बनाउनुस् । यसमा थोरै…